Varotra Broadleaf: fampiasam-bola amin'ny fanaingoana fa tsy fahazoan-dàlana | Martech Zone
Asabotsy, Jona 27, 2015 Alahady, Jona 28, 2015 Douglas Karr
Ao anatin'ny sehatry ny haitao marketing dia nisy fitomboana lehibe niaraka tamin'ny Software ho serivisy sy ny fahafaha-mividy izay ilainao avy ao anaty boaty. Rehefa nandeha ny fotoana dia resin'i SaaS ny vidin'ny fananganana ary orinasa SaaS maro no niainga rehefa azony ny manangana mifanohitra mividy adihevitra momba ny tetibola. Taona maro taty aoriana, ary ny mpivarotra dia mahita ny tenany amin'ny làlana hafa. Ny tena izy dia manao mitohy mihena ny vidiny.
Betsaka ny antony mahatonga ny fihenan'ny vidin'ny trano:
Fitaovana informatika izany dia mitaky orinasa mandoa vola isaky ny fampiasana dia nampidina ny teboka fidirana hatramin'ny an'aliny ka hatramin'ny denaria ara-bakiteny.
API sy SDK - Saika ny serivisy rehetra dia manolotra sehatr'asa fampiharana, ary maro amin'ireo vokatra ampiasainao amin'ny fampiharana SaaS no mampiasa ireo API ireo. Amin'ny alàlan'ny fihoarana ny lampihazo sy ny loharano mivantana dia afaka manangona vola iray taonina ianao. Ary tsy mila manoratra ny kaody voalohany akory ianao satria maro amin'izy ireo no manolotra Kit ny Developer Software hanombohana.
Open Source - ny olona dia nanao ambanin-javatra ambanin-javatra tamin'ny fiantsoana loharano malalaka. Betsaka no nandà izany, te hanana fiarovana, fiarovana ary ekipa serivisy fanoloran-tena amin'ny sehatra rindrambaiko tompony. Saingy ny orinasa dia natsangana tamin'ny loharano misokatra izay tsy vitan'ny hoe manana ireo tombony rehetra ireo, manana orinasa an-jatony na an'arivony maro koa izy ireo izay miantoka ny fiarovana, ny filaminana ary ny fanomezana serivisy.
rafitra - Ny rafitry ny fampandrosoana dia manolotra ny firafitra maritrano azo ovaina izay manome lohany goavambe amin'ny fananganana sehatra. Tohana ihany koa ireo rafitra ary manohy manatsara hatrany rehefa mandeha ny fotoana satria na manome valiny na manome vahaolana ho azy ireo ny mpamorona.
Ampio ireo rehetra ireo miaraka, ary ny orinasa tsy mila manao sorona amin'ny endri-javatra sy ny fampiasa miaraka amin'ny vahaolana ivelan'ny-boaty. Ary tsy nandany vola izy ireo nandoa vahaolana izay manohy mampiakatra ny vidiny rehefa manitatra hatrany izy ireo. Eo anelanelan'ny misy orinasa toa Commerce Broadleaf.
Toetoetran'ny vahaolana ho an'ny orinasa napetraka ho an'ny filan'ny Fortune 500, Broadleaf manome ny fiasa tena tadiavina indrindra hanohanana ny eCommerce B2C, B2B, ary B2B2C amin'ny sanda tsara indrindra amin'ny tsena. Ny vahaolana rehetra dia azo ampanjifaina mba hiantohana ny tranokalan'ny eCommerce mifanaraka amin'ny zavatra takinao manokana. Ny fampandehanana matanjaka ao anatin'ny rafitra maivana dia mampindrana ny sasany amin'ireo toetra mampiavaka an'i Broadleaf amin'ny ambiny. Aza mahatsapa fameperana intsony amin'ny lisitry ny endri-javatra.
Ao amin'ny IRCE, Nipetraka niaraka nipetraka aho Brian Polster an'ny Broadleaf Commerce ary niresaka momba ny fanovana ny tontolon'ny e-varotra sy ny fanaovana ny rafitry ny orinasa toa an'i Broadleaf izay manintona kokoa ireo mpivarotra sy orinasan-tserasera izay mitaky vahaolana mora sy azo amidy amin'ny fivarotana an-tserasera.
Mampiavaka ny orinasa an'ny Commerce Broadleaf dia ahitana:
Harona fiantsenana - ao anatin'izany ny fahaizana mitantana ny fizotran'ny sarety sy fizahana ary koa ny fahaizana mamatotra ny fampiroboroboana ny varotra Marketing sy Merchandising amin'izay ao anaty sarety.
Mikaroha sy mijery - Ny fisehon'ny fikarohana an-tsaina, ny fanasokajiana mahitsy, ny rafitry ny URL namboarin'ireo mpampiasa, ary ny fomba fanao SEO izay manodidina azy dia tsy natao ho an'ny mpampiasa fotsiny, fa tranonkala iray azo jerena.
Fitantanana ny filaminana - Ny famerenana, ny toerany ary ny antsipiriany momba ny fitantanana ny kaomandy fototra dia azon'ny solontenan'ny Serivisy ho an'ny mpanjifa (CSR), raha ny mpanjifa kosa dia azo ampahafantarina ny momba ny filaminana amin'ny alàlan'ny fampandrenesana mailaka. Ho an'ny filàna matanjaka kokoa, Broadleaf dia mahazaka baiko misaraka, sokajy fanatanterahana, dingan'ny RMA, ary ny lalàna mifehy ny filan'ny eCommerce.
Customer Management - Voasoratra anarana na tsy voasoratra anarana, misy na tsy misy fampahalalana momba ny fifandraisana, Broadleaf dia mamela ny toetran'ny mpanjifa manerana ny endrika marketing sy fitantanana maro… manomboka amin'ny vidiny manokana ka hatramin'ny atiny mpanjifa namboarina.
Fanolorana sy fampiroboroboana - manome tolotra kendrena manerana ny mpanjifa, ny kaomandy, ny entana ary ny vidin'ny toe-javatra. Manomboa mividy iray, mahazo iray (BOGO) ka hatramin'ny fivarotana hatramin'ny tolotra manokana.
Product Management - ny lafiny rehetra amin'ny filan'ny Marketing sy ny Merchandising. Ataovy tsotsotra toy ny fampidirana anaran'ny vokatra, famaritana, vidiny ary URL eo ambanin'ny sokajy iray, na sarotra toy ny famaritana ny safidin'ny vokatra, fampahalalana momba ny marketing, haino aman-jery mifandraika, safidy fandefasana ary toetran'ny vokatra.
Multi-ny zavatra rehetra - Mpanofa marobe, tranonkala marobe, vola marobe ary fantsona maro.
Content Management System - tonian-dahatsoratra WYSIWYG hitantanana entana toa ny bilaogy sy ny pejy atiny efa voafaritra mialoha.
Ary mazava ho azy, ny rafitra dia ahafahan'ny orinasa manitatra orinasa, manampy ny orinasany manokana, ary manolo na manitatra serivisy, DAO, na mamorona mpanara-dalàna. Ny lisansa fanontana orinasa dia misy ny fanohanana matihanina miaraka amin'ny fifanarahana ambaratonga momba ny serivisy (SLA).
Tags: brian polsterbroadleafvarotra malalakavarotrae-varotraecommerce